काठमाडौं । विभिन्न देशमा कोरोनाविरुद्ध खोप लगाउने क्रम चलिरहेका बेला नेपालमा पनि यस्तो खोप भित्रिएको छ । भारतले बिहीबार अनुदानमा नेपाललाई १० लाख डोज खोप पठाएको हो । तर यो खोप कुन हो ? कस्तो हो ? लगाउँदा के होला भन्ने आशंका जनमानसमा छ । किनकि भारतमा खोप लगाएका ५८० जना बिरामी परे भने २ जनाको मृत्युसमेत भयो । नर्बेमा पनि काेराेनाविरुद्ध खाेप लगाएका २९ ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भएको खबर...
काठमाडौं । जनस्वास्थ्यविद रवीन्द्र पाण्डेले बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रजातिको भाइरस कोरोना भाइरस नै भएको बताएका छन् । त्यहाँ देखिएको भाइरस कुनै नयाँ भाइरस नभएको बताउँदै उनले भाइरसको स्वरूप मात्र परिवर्तन भएको बताए । सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै उनले बेलायतमा स्वरूप परिवर्तन भएर कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति देखिएको बताए । पुरानो कोरोना भाइरसभन्दा यो ७० प्रतिशत बढी सर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा यस्ताे लेखेका छन्, ‘बेलायतमा...
एजेन्सी । हामीलाई थाहा नहुन सक्छ त्यस्ता सुपरफूडहरू बारे जसले जाडो मौसममा सजिलै तपाईको प्रतिरोध क्षमता सुधार गर्न सक्छ । यदि प्रतिरोधात्मक क्षमताले राम्रोसँग काम गर्दछ भने, रोगहरूले तपाईंलाई छुन सक्ने कारण हुँदैन । उदाहरणका लागि, गुड़ले तपाईलाई इन्फेक्सनबाट जोगाउँछ, साथै रगत पनि शुद्ध पार्दछ । गुड़ खानेले पाचन क्षमता पनि राम्रो हुन्छ । पुसको लाग्दो पागल जाडोमा पनि सुपरफूड हुन त्यो बदाम होस् वा अखरोट वा काजु । ती सबैमा...
डा. रविन्द्र पाण्डे । अमेरिका तथा युरोपका विभिन्न देशमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएको छ । आइतबार मात्र कोरियामा लगभग एक हजार संक्रमितको पहिचान भयो । कोरियाका अधिकारीहरूले यो तेस्रो लहर हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । नेपालमा कोरोना महामारीको छाल केही सेलाएको छ । यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न हामी सबैले आफ्ना स्वार्थ तथा मोहलाई छाडेर समाजका लागि योगदान गर्नु अपरिहार्य बनेको छ । के गर्ने त दोस्रो लहर रोकथामका लागि...
काठमाडौं । घाम मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने र बहुउपयोगी ग्रह हो । ब्रम्हाण्डमा जसरी नै घामको महत्व हाम्रो जीवनमा पनि उत्तिकै छ । घामले सकारात्मक प्रवाह पार्छ, ऊर्जा दिन्छ। बिहानको घाम स्वास्थ्यका हिसाबले लाभदायी पनि हुन्छ। घामले शरीरलाई पुर्‍याउने फाइदा सूर्यको किरणमा पाइने भिटामिन डीले हड्डी बलियो बनाउँछ । बिहानको पारिलो घाममा बस्नाले शरीरमा ‘मेलाटोनिन’ नामको हर्मोन विकसित हुन्छ, जसले निद्रा लगाउँछ । चिसोबाट लाग्ने रोगबाट बचाउँछ । सूर्यबाट निस्कने...